Streak: Jikwaa Pipeline Ahịa Gị na Gmail Na-apụta CRM Nke a | Martech Zone
Ebe m nwere ezigbo aha na mgbe m na-arụ ọrụ na saịtị m, okwu m, edemede m, ajụjụ ọnụ m, na azụmaahịa m… ọnụ ọgụgụ nke nzaghachi na nsonye m kwesịrị ịme na-apụkarị. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na atụfuru m nnukwu ohere naanị n'ihi na anaghị m esoro atụmanya n'oge kwesịrị ekwesị.
Na esemokwu, agbanyeghị, na mmetụ mmetụ m kwesịrị ịga iji chọta ogo azụmaahịa dị oke mma. N'ezie, ejiri m nke ọma ma ọ bụrụ na m gbasoro arịrịọ ọ bụla na agaghị m enwe oge iji wuchaa ọrụ ndị ahịa! Agbanyeghị, iwuli paịpụ siri ike dị mkpa ka ị rụchara ọrụ ma gaa n'ihu ndị ahịa. Ga-arụ ọrụ nke ọma na oge gị touching site n'oge ruo n'oge na-emetụ atụmanya ọ bụla, iru eru ha, ma na-enwe ọganihu ha site na usoro ahịa gị.
Ezigbo azụmahịa ọ bụla nwere ọkpọkọ ahịa dị irè ebe ha na-amata ọkwa nke atụmanya ha dị, onye kacha nso na mmechi, yana ikike ịkọ ikike ha imechi na ịzụlite azụmaahịa. Nke a na-akụda m mmụọ ma ekwetaghị m na ọnọdụ m pụrụ iche. Ekwenyere m na ọtụtụ obere azụmaahịa na-alụ ọgụ maka ijikwa paịpụ ahịa ha na iru eru na iru eru n'ụzọ dị irè. Karịsịa ma ọ bụrụ na ha azụghị ndị ọkachamara na ndị ọkachamara n’ịzụ ahịa.
Nke a bụ ebe a Njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM) sistemụ dị mkpa. Site na CRM, ị nwere ike igosipụta atụmanya gị, dekọba ihe na ha, mata ọkwa nke usoro ahịa ha nọ, mepụta ọrụ na-esote, ma jikwaa mmekọrịta azụmahịa gị nke ọma. Ma… ma ọ bụrụ na nzukọ gị nwere ọtụtụ ndị otu, ị nwere ike iji aka gị mee ihe na ntinye aka n'etiti ndị ọrụ gị.
Streak: Jikwaa Pipeline Ahịa Gị n’ime Gmail
Hazi na ijikwa ngwungwu ngwanrọ ọzọ iji mee nke a bụ ọrụ ọzọ, ọ bụghị obere. Imirikiti ọrụ ahụ na-eme site na email, yabụ ịnweta CRM nke na-ejikọta na ikpo okwu email gị bụ ihe dị mfe maka ịdị mfe na arụmọrụ. Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-arụ ọrụ Google, streak nwere ike ịbụ azịza zuru oke maka gị.
Streak na-ejikọ igbe mbata Gmail ozugbo, nwere ngwa mgbakwunye ihe nchọgharị, yana ọ nwere nnukwu ngwa mkpanaka. Atụmatụ Streak gụnyere:
CRM jikọrọ Gmail - ihe niile ịchọrọ iji "mechie-merie" na-ezo na email gị. Streak na-ejide azụmahịa gị ma na-agbatị Gmail dị na CRM na-agbanwe agbanwe, na-egosipụta ya nke ọma.
Hazie Usoro Ọrịre Gị - Mgbe usoro ahịa ahịa gị gbanwere, imelite Streak bụ ozugbo na kensinammuo. Tinye kọlụm ọhụrụ nke ụdị ọ bụla, megharia usoro, ma ọ bụ hichapụ data n'oge ọ bụla. A na-ahazi ogidi iji nabata ọnụọgụ, ederede ederede n'efu, menu ọdịda, igbe igbe, na ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ.
Ree Nkwado - Ndị ọrụ niile na ohere nwere ike ịgụ ozi ịntanetị zuru ezu ọ bụrụgodị na agụghị ya na eri. I nwekwara ike ijikwa nnweta data gafee ndị otu gị site na iji ikike.
Igbe mbata - Debe ndetu, nyefee ihe aga-eme na ntinye na ntanetị site na otu kọlụm jikọtara nke ọma site na mgbakwunye ihe nchọgharị Streak maka Chrome ma ọ bụ Safari.
Email Snippets - Tinye ederede ederede ugboro ugboro na iwu isi. Jiri ngwa ngwa dee okwu mmeghe, ntinye, na ncheta. Wepụ oge furu efu na ịghaghachi ugboro ugboro.
Email Ndepụta - Ndepụta na-agwa gị mgbe, ebe, na ugboro ole elele email. Jiri Streak iji kpoo ndu n’oge ahụ ha na-eche maka gị.
Ozi jikọrọ ọnụ - Streak na-ewepu nsogbu nke ozi ịntanetị. Dee ozi gị, họrọ ndepụta ndị nnata, ma zipụ.
Nkwupụta pipin Mepụta eserese mara mma na eserese dị mfe na Streak. Hụ otu ego si agagharị na pipeline gị na ndị na - eweta ego na - enwe mmetụta dị ukwuu.
Banye maka Streak
Ngosi: Abụ m mmekọ maka streak na m na-eji njikọ njikọta m na edemede a.
Tags: ngwa igwegam akporo crmihe nchọgharịchrome ngwa mgbakwunyeCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịasochieGmailgmail crmgmail nsochigoogle ụlọoghere ọrụ googleios ngwaiOS crmọrụ ibuedu ndúmejikota ozipipelineatụmanyandọtị safaripipeline ahịastreakihe aga-emeotu na-ere